Nankahery sy nitondra fanampiana ho an'ireo traboina tany Mahanoro ny Praiministra | Primature
Nankahery sy nitondra fanampiana ho an’ireo traboina tany Mahanoro ny Praiministra
Mahazoarivo, faha-17 febroary 2020 – Nidina avy hatrany, nijery ny zavamisy sy nankahery ny traboina, tany amin’ny distrikan’I Mahanoro – Faritra Atsinanana, ny solontenam-panjakana notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny alahady 16 febroary 2020, taorian’ny nandalovan’ny andro ratsy nateraky ny rivodoza Francisco teto amintsika.
Dibo-drano tanteraka ny tanànan’I Mahanoro, nisy ny rava trano, maro ireo traboina sy tsy manan-kialofana, ary simba ny fambolena.
Koa tamin’ny anaran’Andriamatoa filohan’ny Repoblika, Andry Rajoelina, no nitondran’ny Lehiben’ny governemanta ny teny fampaherezana ho an’ny vahoaka tao Mahanoro sy nitondrany ny teny fampiononana ho an’ny mana-manjo satria araka ny tatitra voaray dia nisy ny zaza namoy ny ainy voatototry ny tany, nisy koa ireo mbola tsy hita popoka. Nambaran’ny Praiminisitra fa “Tsy maintsy mifanampy isika satria samy Malagasy ». Ankoatry ny fanolorany sakafo ho an’ny traboina tao an-tampon-tanàna, dia nitety ireo trano misy ny traboina tao amin’ny fokontanin’Ambilabe, any avaratry ny tanànan’i Mahanoro ny Praiministra. Azo lazaina fa voa mafy nandritra ny fandalovan’izao andro ratsy izao ity fokontany voalaza ity, ary raha naneho ny hetahetany ny mponina tany an-toerana dia voatonona ny fanamboarana ny CEG Ambilabe, izay rava tanteraka.
Hentitra ny Lehiben’ny governemanta, ny amin’ny tsy maintsy hijerena ny fomba hametrahana fandriampahalemana sy hiarovana ireo toeram-ponenana tafiditra anaty faritra iva, izay nilaozan’ny traboina, sy any amin’ireo toerana mandray azy ireo. Nisy, araka izany, ny mpitandro filaminana nalefa any amin’ireny toerana ireny.
Hojerena, ankoatra izay, ny toerana na trano izay tena simba mba hamaritana haingana ny fanampiana hatao ary nambaran’ny Praiministra fa ho tonga any Mahanoro ny minisitry ny Mponina izay sady zanak’iny Faritra iny, hitondra fanampiana hafa ihany koa.
Tamin’ny maraina teo dia efa tonga any Mahanoro ny fiarabe iray avy amin’ny BNGRC, nitondra ireo ampahany amin’ny fanampiana; ary efa tonga any an-toerana koa ny sambokely haingam-pandeha, hanamoràna ny famonjenaan’ireo olona traboina.
← Ilaina ny fanovana ny toe-tsaina ho fampandrosoana ny firenena
Fambolen-kazo faoben’ny Primatiora →
Fanarenana ny Faritra Alaotra Mangoro